Burkina Faso - Lassané Kaboré: "In kasta oo ay dhibaatooyinku jiraan, haddana dhaqaalaheennu waa mid adkaysi leh" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Burkina Faso - Lassané Kaboré: «In kasta oo ay dhibaatooyin jiraan, haddana dhaqaalaheenu waa mid adkeeyay» - JeuneAfrique.com
Hal sano ayaa loo galay doorashadii madaxtinimada, Wasiirka Dhaqaalaha Burkinabe, Dhaqaalaha iyo Horumarinta ayaa kalsooni ku qaba barnaamijka horumarinta qaranka. Ku saabsan qaadashada lacagta kaliya ee ECOWAS.
Hal sano oo ah waqtiga loo cayimay madaxweynaha, Lassané Kaboré, 51 sano, maalgeliye weyn oo reer Burkina Faso ah, ayaa soo saaray qiimeyn wanaagsan oo ku saabsan hirgalinta Qorshaha Horumarinta Dhaqaalaha iyo Bulshada (2016-2020), oo lagu qiimeeyay 15 400 bilyan CFA francs (23 bilyan euro).
In kasta oo ficillada dawladdu ay adag tahay nabadgelyo-xumada awgeed, haddana wuxuu ku faraxsan yahay in uu awooday in uu ilaaliyo koboc joogto ah. Sidoo kale wax laga waydiiyay ku-meel-gaarka ku-qaadashada lacagta loo wada dhan yahay ee ECOWAS, wuxuu raad raac ku leeyahay hirgelinta dibuhabayntan weyn.
Afrikada Dhallinyarda: Hal sano laga bilaabo waqtiga kama dambaysta ah ee PNDES, waa maxay qiimeyntaadu?
Lassané Kaboré: Intii u dhaxeysay 2011 iyo 2015, waxaan qabnay iskucelcelis kobaca 5,4%. Laga soo bilaabo 2016 illaa maanta, celceliska celcelis ahaan waa 6,4%, in kasta oo ay sii kordhayaan nabadgelyo-xumada iyo xasilloonida bulshada. PNDES waxay dhiirigelisay dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha mahadi ha ka gaarto abaabulka kheyraadkeena iskaashiga ah. Laamaha amniga iyo difaaca ayaa kali ah miisaaniyada 20%, laakiin Qorshahan la'aanteed waxaan dhibi laheyn dhibaatooyin badan.
Equipe de France – EdF : Sauveur des Bleus, Giroud raconte la gronde de Deschamps – FOOT 01